Email: Koodhka Jilicsan iyo Koodh-celinta Koodhka adag iyo Fasiraadaha | Martech Zone
Email: Soo-kabashada Jilicsan iyo Koodh-celinta Koodhka adag iyo Qeexitaannada
Monday, August 9, 2021 Khamiis, Agoosto 12, 2021 Douglas Karr
Email ka soo kabtaan waa markii e-mayl aysan aqbalin meherad meherad ganacsi ama adeeg bixiyaha internetka cinwaan emayl gaar ah isla markaana lambar loo soo celiyo in farriinta la diiday. Kabaha ayaa lagu qeexay inay yihiin jilicsan ama adag. Fadhiyo jilicsan caadi ahaan waa ku meel gaar asal ahaanna waa koodh loo sheegayo soo diraha inay jeclaan lahaayeen inay sii wadaan isku dayga. Dhibaatooyin adag sida caadiga ah waa kuwo joogto ah oo loo calaamadeeyay inay u sheegaan soo diraha inuusan isku dayin inuu isku dayo inuu mar labaad u diro farriinta qofka loo dirayo.
Qeexitaanka Bounce jilicsan
A bounce jilicsan waa tilmaame ku meelgaar ah oo ku saabsan arrin cinwaanka emaylka qaataha. Waxay ka dhigan tahay cinwaanka emaylku inuu ansax yahay, laakiin adeegu wuu diiday. Sababaha caadiga ah ee kacsiga jilicsan ayaa ah sanduuqa boostada oo buuxa, maqnaanshaha serverka, ama fariinta oo aad u weyneyd. Inta badan bixiyeyaasha adeegga iimaylka ayaa dib-isugu dayi doona inay farriinta u diraan dhowr jeer dhowr maalmood ka hor intaysan quusan. Waa laga yaabaa ama ma horjoogsan karaan cinwaanka emaylka in mar kale la soo diro.
Qeexida Gelid adag
A kacsan adag waa tilmaame joogto ah oo ku saabsan arrin cinwaanka emaylka qofka qaata. Waxay ka dhigan tahay, waxay u badan tahay, cinwaanka iimaylka inuusan ansax ahayn oo serverku si joogto ah u diiday. Waxay noqon kartaa cinwaan emayl khaldan ama cinwaan emayl oo aan ka jirin ama ka sii jirin server-ka qaataha. Bixiyeyaasha adeegga emaylka ayaa sida caadiga ah ka horjoogsan doona cinwaanadan emaylka in markale loo diro. U dirista si isdaba-joog ah cinwaan emayl adag ayaa ka dhigi kara bixiyaha adeegga emailkaaga liiska madow.
4XX Bounce Soft iyo Koodh-celinta Koodhka adag iyo Fasiraadaha
Code nooca Description
421 jilicsan Adeeg lama heli karo
450 jilicsan Sanduuqa boostada lama heli karo
451 jilicsan Khalad ka shaqaynta
452 jilicsan Kaydinta nidaamka oo aan ku filnayn
Sida mid ka mid ah faallooyinkayagu hoos ku xusay, dhabta ah RFC oo laxiriira dirista iimaylka iyo furaha soo celinta wuxuu qeexayaa in xeerarka qaabka 5.XXX.XXX yihiin Guuldarooyinka Joogtada ah, sidaas darteed magacaabista lambarrada adag ayaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin. Arrintu maahan lambarka la soo celiyey, waa sida ay tahay inaad ula dhaqanto cinwaanka emaylka isha laga helayo. Haddii ay dhacdo in lambarrada hoos lagu muujiyo, waxaan tusineynaa lambarro sida jilicsan.
Sababta Sababtoo ah waxaad dib uqiimayn kartaa ama u diri kartaa emayl cusub kuwa helaya mustaqbalka mustaqbalka waxayna si fiican u shaqeyn lahaayeen. Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ku darto caqli galintaada bixinta si aad dib isugu dayo dhowr jeer ama ololeyaal badan. Haddii koodhku sii socdo, markaa waxaad cusbooneysiin kartaa cinwaanka emaylka sida aan la bixin karin.
5XX Bounce Soft iyo Koodh-celinta Koodhka adag iyo Fasiraadaha
500 Hard Cinwaanka ma jiro
510 Hard Xaaladda cinwaanka kale
511 Hard Cinwaanka sanduuqa boostada ee xun
512 Hard Cinwaanka nidaamka xun
513 Hard Sanduuqa boostada ee xun cinwaanka cinwaanka
514 Hard Cinwaanka sanduuqa boostada oo aan caddayn
515 Hard Cinwaanka sanduuqa boostada oo ansax ah
516 Hard Sanduuqa boostadu wuu dhaqaaqay
517 Hard Cinwaanka boostada xun ee cinwaanka cinwaanka
518 Hard Cinwaanka nidaamka diraha xun
520 jilicsan Xaaladda sanduuqa boostada kale ama aan la qeexin
521 jilicsan Sanduuqa boostadu wuu dansan yahay, ma aqbalayo farriimaha
522 jilicsan Sanduuqa boostada oo buuxa
523 Hard Dhererka farriintu wuxuu dhaafay xadka maamul
524 Hard Dhibaatada fidinta liiska
530 Hard Xaaladda nidaamka boostada kale ama aan la qeexin
531 jilicsan Nidaamka boostada oo buuxa
532 Hard Nidaamka aqbali maayo farriimaha shabakadda
533 Hard Nidaam aan awood u lahayn sifooyinka la xushay
534 Hard Farriinta oo aad ugu weyn nidaamka
540 Hard Shabakad kale ama aan la qeexin ama xaalad marin
541 Hard Jawaab lagama helin martida
542 Hard Xiriir xumo
543 Hard Guul darrooyinka adeegga
544 Hard Awoodin in la maro
545 jilicsan Cidhiidhiga Shabakada
546 Hard Wareegga wareegga ayaa la ogaaday
547 Hard Waqtiga la bixinayo waa uu dhacay
550 Hard Xaalad maamuleed kale ama aan la qeexin
551 Hard Amarka aan ansax ahayn
552 Hard Cilad syntax ah
553 jilicsan Qaatayaal aad u tiro badan
554 Hard Doodaha amarka aan ansax ahayn
555 Hard Nooc maamuus khaldan
560 Hard Khalad kale oo warbaahineed ama aan la qeexin
561 Hard Warbaahinta lama taageerin
562 Hard Beddelidda ayaa loo baahan yahay oo la mamnuucay
563 Hard Beddelaad ayaa loo baahan yahay laakiin lama taageerin
564 Hard U beddelashada luminta la sameeyay
565 Hard Beddelka ayaa fashilmay
570 Hard Xaalad amni oo kale ama aan la qeexin
571 Hard Gaarsiinta lama fasaxin, fariin waa la diiday
572 Hard Balaadhinta liiska dirista waa mamnuuc
573 Hard Beddelaadda amniga ayaa loo baahan yahay laakiin suurtagal maaha
574 Hard Tilmaamaha amniga lama taageerin
575 Hard Fashilinta 'Cryptographic failure'
576 Hard Algorithm Cryptographic lama taageerin
577 Hard Fariin la'aanta farriinta
911 Hard Soo kabasho adag oo aan lahayn koodh soo kabasho oo la helay Waxay noqon kartaa emayl aan ansax ahayn ama iimayl la diido oo laga helo server-kaaga (sida xadka dirista)
Qaar ka mid ah ISPs sidoo kale waxay leeyihiin sharaxaad dheeri ah oo ku saabsan xeerarkooda soo kabashada. Eeg AOL, Comcast, Cox, Outlook.com, Postini iyo Yahoo!Goobaha boostada loogu talagalay qeexitaannada koodhadhka bounce-ka ee dheeraadka ah.
Tags: 400 koodh kabasho421 kacsan jilicsan450 kacsan jilicsan451 kacsan jilicsan452 kacsan jilicsan500 koodh kabasho500 kacsan adag510 koodh bounce511 koodh bounceqeexida koodhka soo kabashadaraadinta koodhka soo kabashadaxeerarka ka soo kabashadaemayl lambarrada soo kabashadakacsan adagxeerarka ka soo kabashada adagkacsan adag ama jilicsanRF 3463bounce jilicsanxeerarka ka soo kabashada jilicsan
3 Casharrada laga helo Shirkadaha Run ahaantii Macaamiisha u ah
5, 2016 at 3: 56 AM
Haye, xoogaa waan ku wareersanahay sida looxisaabtamo emaylka iyadoo lagu saleynayo xeerarka midkoodna jilicsan ama dhib badan. Sababta oo ah halkan, gudaha RFC 3463 (https://tools.ietf.org/html/rfc3463) waxay leedahay koodhadhka qaabkoodu yahay 4.XXX.XXX waa Persistent Transient Failures oo macnaheedu yahay inay ku dhacaan qaybta soo kabashada jilicsan iyo xeerarka qaabka 5.XXX.XXX waa Joogto Joogto ah, taas oo macnaheedu yahay inay ku hoos dhacaan dhibco adag.
Ma caddeyn kartaa sababta ay u jiraan lambarro xaaladood oo ka bilaabmaya 5 loo qoondeeyey inay yihiin jilicsanaan jilicsan maqaalkan?
Jan 14, 2017 at 5: 25 AM
Waxaan u maleynayaa midigtaada Rajit, qoraaga waa inuu cadeeyaa oo wax ka bedelaa maqaalka si waafaqsan. Ma jiraan wax ka xun war qaldan!
Jan 14, 2017 saacadu markay ahayd 6:53 PM
Talo adag Rajith iyo David. Waxaan doonayaa inaan wax ka beddelo maqaalka oo aan ku daro qoraalo.
Agoosto 1, 2017 saacaddu markay ahayd 12:30 PM
Waa salaaman tahay waxaan qabaa su'aal, waxaan sameeyaa boosteejooyinka naadiyada oo wada xiriirka waxay soo saartaa wadahadalkeeda ku saabsan qaabeynta, DNS, Kootada, iyo wax aan jirin. Invaild i quess waa fududahay in meydadka si khaldan loo qoro isla markaana kootada probaly ay ka dhigan tahay in sanduuqa boosta uu buuxo. Tani ma saxbaa? Haddii kale maxay ka dhigan tahay? sida wel sida wat labada kale ee kale loola jeedo: syntax iyo DNS? salaan Gouwe